Pa-O Youth Organization (PYO) – Page7– To promote quality critical thinking and creative of youth
တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းအား တစ်နှစ်ပြန်လည်စမ်းသပ်လည်ပတ်စဉ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ယခင်ထက် ပိုမိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ၂၂ နှစ်ကြာ ထပ်မံ၍ လည်ပတ်မည်ဆိုပါက ဒေသခံများ၏ ရေရှည်ကျန်းမာ ရေးပြဿနာများ ပိုမိုဆိုးရွားလာဖွယ်သာရှိပြီး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြင့် နေထိုင်သွားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ဒေသခံများက လက်မခံကြောင်း...
တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ရပ်ဆိုင်းရန် ဒေသခံများ လိုလား
မေလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ နန့်ဘွားခလိန် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် တီကျစ်ဒေသတွင်ရှိသည့် တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံမှာ ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရန် တီကျစ်ဒေသခံများက လိုလားနေကြကြောင်း...
Statement opposing the planned restarting of the Tigyit coal fired power plant By the Tigyit Communities and Pa-O Youth Organization (PYO)...
---------------------------------------------------------------------------------------- သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် တီကျစ် ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံ တစ်နှစ်တာ စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု အပြီး စီမံကိန်း ဆက်လက် လည်ပတ်သွားမည်ကို တီကျစ်ဒေသရှိလူထုများ အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိနေသည်။ တီကျစ် စီမံကိန်း ဆက်လက်လည်ပတ်ပါက ပိုမိုဆိုးရွားမည့် အခြေအနေကို လေ့လာနိုင်ရန်၊ ဒေသခံလူထုများ ဒုက္ခထပ်...
ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် ရွာသားတစ်ဦးအား အပြစ်မရှိ ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် PNA အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ် ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ
Friday, March 23, 2018 စိုင်းရာဇာ၊ ကမ္ဘောဇတိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့ နယ်၊ ဘန်းယဉ်တိုက်နယ်၊ တိကလိုင် ကျေးရွာတွင် မတ်လ ၂၀ ရက်က ဒေသခံရွာသားတစ်ဦးအား အပြစ်မရှိ ရိုက်နှက်သည့် PNA...
ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ တီကျစ် လျှပ်စစ်အားပေးစက်ရုံသို့ ကျောက်မီးသွေးပေးပို့နေသည့် ဧဒင်ကုမ္ပဏီ၏ တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက် အတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
Tuesday, April 24, 2018 မင်းဇော်မင်း၊ ကမ္ဘောဇတိုင်း . ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ထားသည့် တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ ကျောက်မီးသွေးလောင်စာ ပေးပို့နေသော ဧဒင်စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ...
တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံလည်ပတ်မှု နောက်ဆုံးအခြေအနေ
RFA သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။ ၂၀၀၅ ခုကတည်းကစပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်လည်ပတ်တဲ့ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို အကြီးစားပြင်ဆင်ဖို့ ပိတ်ထားပြီး မနှစ်က ဧပြီမှာ တနှစ်ပြန်လည်စမ်းသပ်လည်ပတ်ပါတယ်။ မီးခိုးအထွက်နည်းသွားတာကလွဲလို့ တနှစ်အတွင်း ဘာမှ မထူးခြားတဲ့အပြင် လည်ပတ်သံဆူညံလို့ ဒေသခံတွေ စက်ရုံအပြင်ဘက်စုရုံးပြီး...
Myanmar President Office ————————————————————————————— (၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့) လေးစားအပ်ပါသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးနှင့်တစ်ကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တက်ရောက်လာကြသော ဂုဏ်သရေရှိဧည့်သည်တော်များနဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအားလုံး ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး...
ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (P.Y.O)မှ ဖွင့်လှစ်မည့် အဆင့်မြှင့်နိုင်ငံရေးသင်တန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတိုင်ပင် အကြံအဥာဏ်များရယူခြင်း အခမ်းအနား ပင်လုံမြို့နယ်။ မတ်လ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
မြင်းခြံ သံမဏိစက်ရုံ ရပ်ထားပါက သမိုင်းမှတ်တမ်း အဖြစ် ကျန်ရစ်မည်ဟု စက်မှုဝန်ကြီးပြော
ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/22/154669.html By မိုးမိုး 22 March 2018 Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. အမှတ် (၁) သံမဏိစက်ရုံ...